I-PHP Mailer Ibulala iwebhusayithi njalo ngomzuzu ongayifunde lesi sihloko esithi "ITS
I-code engaqondakali yekhodi yokudeleka engenakuzivikela eyenziwe i-PHPMailer, ukuma phakathi kwe-oki mossycup kusetshenziswe kabanzi i-imeyili ye-PHP yokuthumela imilayibhrari, Kungase ibekwe izigidi zamasayithi Ezengozini yokumangalela.
Kungenzeka ukuthi ukungapheleli kwakutholakala ku-Toward An onguchwepheshe wezokuphepha okuthiwa u-Dawid Golunski Yini okungenzeka ukuthi ukulungiswa kokuqala kungenzeka kufakwe ku-PHPMailer 5. I-2. I-18, okungenzeka ukuthi yenziwe ngomgqibelo. Kodwa-ke, kuvela ukuthi i-patavium kungenzeka ukuthi ayinelisekile Ngaphezu kwalokho ingahle idlule.
Umtapo wolwazi we-PHPMailer ungasetshenziswa ngokuqondile ngenye indlela. Ngokuhamba kwesikhathi uTom usebenzise umthamo wokuqukethwe okwenziwe ngokubheka umnotho womnotho (ama-CMS) kuhlanganise ne-WordPress, i-Joomla futhi i-Drupal. Indawo lapho umtapo wezincwadi ungafakwanga khona Ngaphambili, ikhodi yabo yesikhungo, kuzothunyelwa kufinyeleleke ngokuphathelene nomdwebo I-module ehlukile ngokuhlukile ingafakwa emaphaketheni angenezela eceleni.
Ngenxa yalokhu, lezo zinkinga ze-camwood zihluke ngokuqala ngewebhu ngewebhu. Isibonelo, lokho kubambisana kokuphepha kweJoomla kusho ukuthi leyo class Joomla JMail, exhomeke kanye ne-PHPMailer, idinga ukuqinisekiswa okungeziwe okwakhiwe ekusebenziseni ukuvikelwa okungenakuzivikela okungenangqondo.
Ukungapheleli kuzothathwa Ukubekwa kwe-insufflate ukwamukelwa kolwazi lwekheli le-imeyli Ulwazi futhi kungavumela umhlukumezi uyokwenza imiyalo yegobolondo engase iqhutshwe kwi-server yewebhu ekusetshenzisweni komsebenzi we-sendmail.
Kodwa-ke, ukuhlukunyezwa okukhulu kwenza labo abakuzungezile kubonakaliso bewebhu kuwebhusayithi ukuthi abaqashi i-PHPMailer bayothumela imilayezo Futhi ivumela ukufaka indawo ye-imeyili yomthumeli wangokwezifiso - indawo ebonakala kuvela kwi-header ye-imeyli. Ingaqapheli ukuthi ukulungiswa okunjalo okuvamile kungakanani, ngokubonakaliswa kwewebhu ngokuvamile kuletha i-imeyli yomthumeli echazwe futhi okuhle ukuvumela amaklayenti kufanele azise ikheli labo le-imeyili Ngokufanayo njengenzuzo.
"Zonke izindawo eziphakathi ne-Joomla API ezithumela i-imeyili zisebenzise ikheli lomthumeli elihlelwe ukusethwa emhlabeni jikelele Ngaphezu kwalokho akucabangi ngolwazi lweklayenti kufanele kube khona indawo," kusho ukubambisana kwezokuphepha kweJoomla. "Noma kunjalo, izandiso ezipakisha ukuhlukahluka okuhlukile kwe-PHPMailer ngaphandle kokusebenzisa i-Joomla API ngokuthumela i-imeyili kungase kube nethuba lokuzivikela uma lokhu kukhishwa. ".
Abathuthukisi be-WordPress bafika esiphethweni sokuqhathanisa, beqaphela ngokwabo bug tracker ukuthi umsebenzi wangaphakathi wp_mail () osebenzayo Kulokhodi yeziko le-WordPress angeke lithonywe kuyo akusebenzisi umsebenzisi we-PHPMailer ongenamandla. Amaphakheji weqembu lesithathu abasebenzisa i-wp_mail () ngokuphumelelayo kufanele atholakale ngokungathandabuzeki angenzi ithonya noma kunjalo, kodwa ukuqhutshwa kwamaphakheji athile kungase kube khona ngaphansi kokuhlolwa.
"I-4 esondelayo. I-7. Ukufika kwe-1 kuzosiza abaningi kulezi zindaba, "kusho uDion Hulse. "Sithunyelwa ngelabhulali evikelekile yokuthumela kuphela ye-WordPress - kunoma ikuphi uma sisebenzisa isici noma cha. ".
Iqembu lezokuphepha le-Drupal libuye libeke umbiko wokuphepha walolu daba Yini okunye okuyihlolile njengokubaluleka, naphezu kokuthi ikhodi yedolobha likaDrupal ngeke ithonywe Ekugcineni uTom uhlukumeza lokho ukungapheleli.
"Ngenxa yokugxeka okuphawulekayo kulo magazini futhi isikhathi sokukhishwa kwayo sinikeza incwadi ejwayelekile yokuphatha abantu ngokucophelela okungenzeka kuthonya abagcini bezinsizakalo zeDrupal," kusho lokho kubambisana.
Esikhathini sokusungulwa kwe-camwood singenqamuke futhi ikhodi yokusebenzisa kabi abantu abaningi ingatholakali, labo abangenakuzivikela badinga isimo sezinsuku-kuzothunyelwa esidlangalaleni futhi kungabanjwanga. Ngaphezu kwalokho, umphumela oqondile lo mphumela uhluka kusuka kuwebhusayithi kuya kuwebhusayithi, ngokuthembela ukuthi i-PHPMailer ingasetshenziswa kanjani, akuyona indlela elula ye-webmasters ezosusa inkinga ngaphandle kokuhlola ngokucophelela.
Ukucabanga ukuthi basebenzise i-PHPMailer ngokuqondile Ngaphambili, ikhodi yabo yewebhusayithi, kufanele baqedele umtapo we-patchcord yakamuva uqinisekise ngokushesha Ngokufanayo njengoba kukhishiwe. Kufanele bakhuthaze futhi bahlole ukuthi Kungakhathaliseki ukuthi bayithintana kanjani nabo, impendulo, ukubhaliswa, ukusetha kabusha i-imeyli Ngaphezu kwalokho izinhlobo ezahlukene zihambisa imiyalezo yalokho ukusikisela kokuhumusha okungenakuzivikela kwe-PHPMailer Kuyinto engaphezu kwalokho okubheka ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu ohlukumezayo angawazisa leyo ndawo ye-imeyli indawo.
Kusetshenziswa uhlelo lokulawulwa kwezidakamizwa okumele lube nolwazi olwengeziwe olulinganisa i-website yalo yocwaningo ukuze lubone ukuthi ngabe luthonywe yini ngokuhambisana nokusetha okuzenzakalelayo. Ngemuva kwalokho kufanele abambelele labo abagibelayo noma yikuphi Kunoma yikuphi amamojula angamanye ama-plug-ins adingekayo asetshenzisiwe Futhi angasebenzisa i-PHPMailer eyedwa.